ဂိုဒေါင်စင်ပေါ်သုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများ stacking နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘာတွေလဲ? - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတ္တုသိုလှောင်ပစ္စည်းသတ္တုကွန်တိန်နာ,ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း,Pallet,ထိန်သိမ်း,roll ကွန်တိန်နာ etc
နေအိမ် » ဂိုဒေါင်စင်ပေါ်သုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများ stacking နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘာတွေလဲ?
ဂိုဒေါင်စင်ပေါ်သုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများ stacking နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘာတွေလဲ?
အင်တာနက်ခေတ်၌, အင်တာနက်၏အရှိန်အဟုန်သည်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်. e-commerce အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာစတင်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. သိုလှောင်ရုံအများစုကိုအသုံးမပြုနိုင်ကြောင်းလက်ရှိအခြေအနေအားလုံးကဖော်ပြသည်. ဂိုဒေါင်ကုန်လှောင်ရုံကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဂိုဒေါင်အကြားသဘောတူညီချက်ဘယ်လိုဖြည့်သလဲ?
ရိုးရာနည်းလမ်းမှာကုန်ပစ္စည်းများကိုအတူတကွစုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီနည်းလမ်းများစွာအဆင်မပြေရှိပါတယ်. ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရေးမသာ, ဒါပေမယ့်အချိန်စားသုံးမှုနှင့်မှားကုန်ပစ္စည်းများပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်. ကုန်လှောင်ရုံစင်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရိုးရာထုတ်ကုန် stacking mode နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှင်းလင်းစွာနှိုင်းယှဉ်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်.
1. ဂိုဒေါင်စင်များသည်ဂိုဒေါင်၏သိုလှောင်မှုကိုသုံးဖက်မြင်ဖြစ်စေနိုင်သည်, သောဂိုဒေါင်များ၏ထက်ပိုငါးဆသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်.
2. ဂိုဒေါင်စင်များအသုံးပြုခြင်းသည်သဘောင်္တင်ပို့သည့်အချိန်ကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေနိုင်သည်, ကုန်စည်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်သုံးဖက်မြင်သိုလှောင်ရုံသည် ပို၍ များလာသည်, အရှင်အလွန်ဂိုဒေါင်၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်.
3. ဂိုဒေါင်ထဲမှာကုန်ပစ္စည်းများစနစ်တကျစီစဉ်ထားသည်, နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အလုပ်ကောင်းစွာလူသိများသည်. ဂိုဒေါင်၏အသုံး ၀ င်သောကုသမှုကိုဂိုဒေါင်၏အကျယ်အဝန်းကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအသုံးချခြင်းရှိ၊, နှင့်ဂိုဒေါင်၏ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းရှိမရှိ. ဒီနှစ်ခုအချက်များမှာ, ဂိုဒေါင်စင်များတိကျစွာအသုံးပြုခြင်းသည်ဂိုဒေါင်ပြုပြင်ခြင်းတွင်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်.
4. စက်မှုလုပ်ငန်း၌တည်၏, ကုန်ပစ္စည်းများသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလည်ပတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုကုန်ပစ္စည်းများအမြဲတမ်းလောင်လိမ့်မည်ဟုလူတိုင်းသိကြသည်, ဒါပေမယ့်ကုန်လှောင်ရုံစင်ပေါ်အသုံးပြုမှုကုန်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ညှစ်ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်. သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချပြီးကုန်ပစ္စည်းများလည်ပတ်မှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း.
5. ထုံးစံအတိုင်း stacking mode တွင်မကျေနပ်စရာများစွာရှိသည်. အချိန်ကြာမြင့်စွာမဝတ်နိုင်သည့်အစားအစာသိုလှောင်ရုံများ ပို၍ များလာသည်, အစားအစာနှင့်သောက်သုံးမှုအားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းထားကြသည်, နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကျိုးပဲ့နေကြသည်. ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ရန်အထောက်အကူမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဂိုဒေါင်စင်ပေါ်သုံးပြီးပြီးနောက်, ထိုကဲ့သို့သောအစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်မှုကဲ့သို့သောတန်ပြန်အစီအမံများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်, နှင့်သိုလှောင်မှုအရည်အသွေးတိုးတက်လာသည်.
6. ကုန်ပစ္စည်းများ၏အလေးချိန်ကွာခြားချက်နှင့်အညီသိုလှောင်စင်များကိုအမျိုးမျိုးသော ၀ န်ဆောင်မှုပစ္စည်းများအတွက်စီစဉ်နိုင်သည်, သိုလှောင်ရုံ၏စင်များများ၏သယ်ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းအားကိုအလွယ်တကူပုံပျက်။ မရစေနိုင်သည်, ထို့အပြင်၎င်းသည်လုပ်ငန်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုမတားဆီးနိုင်ပါ. ဂိုဒေါင်စင်များအားလုံးတည်ငြိမ်မှုနှင့်မတူကွဲပြားမှုရှိသည်, နှင့်မျက်နှာပြင်ယူနီဖောင်းဖြစ်ပါတယ်. ၎င်းကိုချဉ်ခြင်းဖြင့်ကုသသည်, ချေးနှင့်သံချေးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ phosphating နှင့် electrostatic မှုတ်လိမ်း.
post ကိုအချိန်: 2019-08-29